“एडप्ट एन एनिमल” ट्रेन्ड - अन्य - नारी
“एडप्ट एन एनिमल” ट्रेन्ड
श्रावण १८, २०७८ गल्फ खेलाडी अदिति घिमिरेलाई खेलप्रति जति प्रेम छ, जनावरप्रति उनी त्यति नै प्रेमिल छन् । उनका घरमा तीन वटा कुकुर छन् । यतिबेला उनले रेडपान्डाको पनि हेरचाह गरिरहेकी छन् । उनले पान्डालाई घरमा राखेर भने हेरचाह गरेकी होइनन् । जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाको ‘एडप्ट एन एनिमल’ अभियानअन्तर्गत अदितिले यो जिम्मेवारी पाएकी हुन् । उनले पान्डा नै ‘एडप्ट’ किन गरिन् त ? जवाफमा भन्छिन्, ‘पान्डा लोपोन्मुख भएकाले मैले यसलाई एडप्ट गरेकी हुँ ।’ वार्षिक केही रकम खर्च गरी एउटा जनावरको अभिभावकत्व लिन सकेकोमा आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको बताउँछिन् ।
१० वर्षीय भिभान सिंह बस्न्यातले पनि चिडियाखानाको दुई लभबर्ड ‘एडप्ट’ गरेका छन् । दुई वर्षअघि उनले ‘बर्ड्स अफ प्याराडाइस’ भ्रमणपछि उनलाई चराप्रति आकर्षण बढेको हो । वार्षिक १५ हजार रुपैंयाँ तिरेर उनले लभबर्ड ‘एडप्ट’ गरेका हुन् । चरा पाल्न उनले आफ्नो बचत खर्च जुटाउँछन् । उनले ‘एडप्ट’ गरेपछि आफूलाई चराप्रति जिम्मेवारी महसुस भएको बताए ।
अदिति र भिभानजस्तै चिडियाखानामा जनावर ‘एडप्ट’ गर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चिडियाखानाको २५ औं वर्ष (रजत जयन्ती) अवसरमा वन्यजन्तु ग्रहण (एडप्ट एन एनिमल) गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि धेरैको यो रोजाइ बनेको हो । उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी मात्रै नभई विदेशीले पनि ‘एडप्ट’ गर्न पाउँछन् । गत मार्चमा अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सिंगे गैडा र पूर्ववनमन्त्री प्रेम आलेले हात्तीको अभिभावकत्वको घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र चिडियाखानाको पहलमा ‘एडप्ट एन एनिमल’ को अभियान सुरुवात गरेसँगै जनावर र पशुपन्छीको अभिभावकत्व लिनेहरूको संख्या बढेको आयोजना व्यवस्थापक डा.चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले बताए । कोभिड महामारी सुरु भएसँगै वन्यजन्तुमा पर्ने असरका कारण यो अभियान सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । अभियानलाई व्यक्तिगत र कर्पोरेट गरी दुई वर्गमा छुट्याएको चिडियाखानाकी वरिष्ठ क्युरेटर रचना शाहले बताइन् । उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ‘एडप्ट’ गर्नेहरूका लागि वार्षिक पाँच हजारदेखि दुई लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्पोरेटहरूका लागि ७५ हजारदेखि १५ लाखसम्म खर्च लाग्छ । हालका लागि अनलाइनमार्फत नै आफूलाई मनपर्ने पशुपन्छी/जनावरहरूको औषधि उपचारदेखि खानपानसम्मको दायित्व र हेरचाह गर्न सक्ने व्यवस्था चिडियाखानाले मिलाएको छ । ‘एडप्ट’ गर्न चाहनेले सम्पूर्ण जानकारी बेवसाइटमार्फत लिन सक्छन् । इच्छुक व्यक्ति र कम्पनीहरूले जनावरको सम्पूर्ण जानकारीसमेत लिन सकिने रचनाले बताइन् ।
कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीका अनुसार यो अभियानको उद्देश्य आर्थिक संकलन गर्नुका साथै जनावर र मानिसबीचमा भावनात्मक सम्बन्ध कायम गराउनु हो । उनी भन्छन्, ‘फन्डमार्फत नै वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्नु कोषको उद्देश्य हो ।’ कोरोना महामारीका कारण वन्यजन्तु संकटमा परेकाले यो अभियानले तिनको संरक्षणमा सहयोग पुगेको उनले बताए । चाहेर पनि घरमै जनावर पाल्न नसक्नेहरूका लागि यो अभियान सहयोगी भएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले घरमा व्यक्ति जनावर पाल्न वञ्चित छन्, चिडियाखानामा इच्छानुसार एडप्ट गर्न सक्छन् ।’ कोष र चिडियाखानाले यो अभियानलाई थप बिस्तार गर्दै लग्ने योजना बनाएको छ ।
‘एडप्ट’ गर्न चाहनेले सम्पूर्ण जानकारी बेवसाइटमार्फत लिन सक्छन् ।
– रचना शाह
कोभिड महामारी सुरु भएसँगै वन्यजन्तुमा पर्ने असरका कारण यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
– डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल
यो अभियानको उद्देश्य आर्थिक संकलन गर्नुका साथै जनावर र मानिसबीचमा भावनात्मक सम्बन्ध कायम गराउनु हो ।
भाद्र ४, २०७८ - टी ट्रेन्ड
वैशाख १९, २०७८ - गर्भावस्थाका तस्बिर देखाउने ट्रेन्ड